Vondron'orinasa Bracalente - Vondron'orinasa Bracalente
CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATE (kitiho eto)
Ny sisin'ny Bracalente™
2: Famokarana fifanarahana
3: Chain famatsiana
4: Fiantohana kalitao
5: fitantanana risika
6: Fanatsarana tsy tapaka
Taktika | fiarovana
Fahaizana, fitaovana ary fanamarinana
Kolontsaina sy asa
Lova na taninay
Vahaolana famokarana mazava tsara ho an'ny tsena manerantany
Jereo ny tantarantsika Bracalente
Nandritra ny telo taona mahery, dia nanolotra vahaolana amin'ny famokarana ho an'ny mpanjifanay izahay.
Ny faritra misy anay dia singa lehibe manampy amin'ny fampiroboroboana ny indostria avy amin'ny Aerospace, Automotive, Fambolena sy ny Elektronika mankany amin'ny Indostrialy, Fitsaboana, solika ary gazy, fialamboly ary taktika. Ny tsy fitovizanay dia ny fanatonanay ny orinasanao. Ny firenentsika dia fanitarana ny ekipanao. Hainay ny famokarana satria mpanamboatra manamboatra vahaolana manodidina ny orinasanao izahay.
Antsoinay hoe Bracalente Edge.™
Ianaro ny fomba anaovantsika izany
Ny tantaranay Bracalente
Ny vahaolana amin'ny famokarana mazava tsara dia mitarika ireo mpanelingelina tsena sy mpitarika ny fanavaozana eny amin'ny rivotra, an-tanety ary na aiza na aiza misy azy.
mpahay siansa, Agriculture Automotive Electronics Industrial Medical Oil & Gas Fialamboly Taktika | fiarovana
Manomboka amin'ny foto-kevitra ka hatrany amin'ny famoronana, ireo singa milina mazava tsara anao dia atolotra ara-potoana miaraka amin'ny kalitao avo indrindra sy tsy fivadihana.
Miodina ny Precision CNC
Fametahana / fanamarihana
Gages amin'ny endrika boribory
Amplifier amin'ny Air Gage
Famindrana Rotary CNC
Screw mandeha ho azy
Fitrandrahana, fikosoham-bary ary fanoratana
Deburring / famaranana
Fitaovana fanadiovana faritra manokana
Vy sy fanariana
Firaka vy metaly
Plastika / synthetic
Non-Metal tsy biolojika
Famokarana fifanarahana manokana, drafitra fanalefahana ary ekipa natokana ho anao.
Jereo ny fomba anaovantsika azy
Tamin'ny 1950, Silvene Bracalente dia nanokatra fivarotana masinina tany ivelan'i Philadelphia, Pennsylvania. Taranaka telo taty aoriana, Bracalente dia mbola fananan'ny fianakaviana sy miasa ary mamorona vahaolana famokarana azo ianteherana ho an'ny orinasa manerantany.
Ny ekipanay dia taratry ny soatoavinay fototra. Jereo ny antony mahatonga ny olonay ho fananana sarobidy indrindra aminay.
Manorata amin'ny bokintsika
Nandritra ny telo taona mahery, ny Bracalente Manufacturing Group dia nanome vahaolana famokarana marina ho an'ny tsena manerantany. Avy amin'ny prototype ka hatramin'ny famokarana, ary miaraka amin'ny toerana any Etazonia, Shina, Vietnam ary India, ny BMG dia manolotra singa ilaina amin'ny ora ara-potoana ho an'ny aerospace, fambolena, fiara, elektronika, indostrialy, fitsaboana, solika sy gazy, fialamboly ary tetika.
© 2022 Vondrona Manamboatra Bracalente
Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay hanomezana anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovana ireo safidinao sy famerenana mitsidika. Amin'ny fipihana ny "Manaiky aho" dia manaiky ny fampiasana ny cookies rehetra.
Noho ny antony mahomby sy azo antoka dia mampiasa Cloudflare ho tamba-jotra CDN izahay.
Rehefa mameno takelaka amin'ity tranonkala ity ianao, dia manaiky ny hamela an'i Bracalente hitahiry sy hikirakira izany data izany amin'ny alàlan'ny Mailchimp sy Hubspot. Manolo-tena hiaro sy hanaja ny fiainanao manokana izahay, ary ny mombamomba anao ihany no hampiasainay hitantanana ny kaontinao sy hanomezana ireo vokatra sy serivisy nangatahinao taminay. Indraindray izahay te-hifandray aminao momba ny vokatra sy serivisinay ary koa ny atiny hafa mety hahaliana anao. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ireto fifandraisana ireto amin'ny fotoana rehetra.
GTranslate no plugin ampiasainay handikana ny votoatin'ny tranonkala amin'ny fiteny samihafa. Miorina amin'ny Google Translate, izay mety hametraka cookie "googtrans" hahatsiarovana ny fiteny voafantina.
Mampiasa Google Fonts amin'ny alàlan'ny Google API ity tranonkala ity. Raha misy font angatahan'ny browser-nao, dia adiresin'i Google ny adiresy IP-nao ary ampiasaina amin'ny tanjona fandalinana.
Mampiasa ny serivisy YouTube izahay ahafahan'ny streaming atiny video mandeha amin'ity tranonkala ity.
Mampiasa Google Analytics sy Webtrax izahay hanaraha-maso ny fivezivezena amin'ny tranokalanay sy hamoronana doka kendrena.
Misafidiana fiteny iray